Finoana :: Hadika amin’ny fitenimparitra ny Baiboly malagasy • AoRaha
Finoana Hadika amin’ny fitenimparitra ny Baiboly malagasy
Feno 185 taona, omaly, ny nanontana voalohany ny Baiboly malagasy. Miroso amin’ny fanontana amin’ny fitenimparitra eto Madagasikara ny Fikambanana Mampiely Baiboly malagasy, amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’io fikambanana io. Sivana hisafidianana ny teny handikana ny Baiboly kosa ny isan’ireo olona mampiasa an’ilay fitenim-paritra. Fiangonana telo eto Madagasikara no efa nahavita nandika ny bokin’ny masindahy Lioka amin’ny fiteny Betsileo sy amin’ny fiteny hafa avy any Atsimon’ny nosy ka mampiasa izany.
“Valo ambin’ny folo taona no fepotoana nandikana ny baiboly malagasy voalohany. Tsy hiandry an’izany fe-potoana izany isika vao hanonta ny boky fa vantany vao mahadika boky iray, toy ny bokin’i Lioka, na ny an’ i Matio… dia havoaka izany”, hoy Rason Elsa, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny fikambanana Mampiely Baiboly.
Fantatra ihany koa fa efa nahitsy indimy ny Baiboly malagasy, hatramin’ izay 185 taona nandikana azy voalohany izay. Miroso amin’ny fanavaozana fahaenina ny Mampiely Baiboly, ankehitriny. Mivoatra ny teny malagasy sady misy koa ireo voambolana sasany tsy miasa intsony. Tsiahivina fa efa nisy ny fanavaozana ara-teknolojika momba ny Baiboly, tamin’ny alalan’ny famokarana kajimirindra ho an’ny solosaina sy ny finday, izay novokarin’ireo teknisiana malagasy.
“Baiboly karazany telo, amin’ny fiteny malagasy, miisa dimy alina isan-taona no voatonta manerana ny Nosy, isan-taona. Dimy alina sy roa hetsy sy sivy tapitrisa (9 250 000) kosa, hatramin’izao no efa naparitaka manerana an’i Madagasikara, hatramin’ny 1835, fotoana nanontana voalohany ny Baiboly tamin’ ny fiteny malagasy”, hoy hatrany Rason Elsa.
Nanamarika an’izao faha-185 taona nanontana voalohany ny Baiboly tamin’ny fiteny malagasy izao, tamin’ny alalan’ny fotoam-pivavahana nalefa tamin’ny fahitalavitra kosa ny Mampiely Baiboly, omaly.